Ebumnuche Na-emekarị Ka Gbanwee OST Fapụ Ormụ-Aka
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Ebumnuche Na-emekarị Ka Gbanwee OST Fapụ Ormụ-Aka
Ebumnuche Na-emekarị Ka Mee Microsoft Exchange OST Fapụ Ormụ-Aka
The Exchange offline nchekwa (.ost) faịlụ bụ mpaghara na offline offline nke igbe akwụkwọ ozi dị na ihe nkesa Exchange. Mgbe ọ bụla igbe akwụkwọ ozi dị na ihe nkesa na-adịghị na-adịgide adịgide, ndị OST faịlụ a na-akpọ mgbei.
E nwere ọtụtụ ihe ga-eme ka gị Gbanwee folda na-anọghị n'ịntanetị (.ost) faịlụ nwa mgbei. Anyị na-ekewa ha ụzọ abụọ, yabụ, ihe ngwaike na nke sọftụwia.
Mgbe ọ bụla ngwaike gị dara n’ichekwa ma ọ bụ ịnyefe data nke ọdụ data Exchange Server gị (.edb), ọdachi data na-eme na sava ahụ ga-akụ. N'oge ahụ, OST faịlụ ga-enwe mgbei. Enwere ụdị atọ:
Ndabere Ngwaọrụ Data Nchekwa. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na diski ike gị nwere ụfọdụ ọjọọ ndi na gị Exchange Server ọdụ data na-echekwara na ndị a ndi. Mgbe ahụ ikekwe ị nwere ike ịgụ naanị akụkụ nke faịlụ nchekwa data. Ma ọ bụ data ị gụrụ ezighi ezi ma jupụta na njehie. Dị otú ahụ a data ire ure ga-eme ka nchekwa data adịghị na gị OST faịlụ nwa mgbei.
Ike Ọdịda ma ọ bụ Server Server na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ike ọdịda eme ma ọ bụ na ị mechie ihe nkesa Exchange na-ezighi ezi mgbe ihe nkesa Exchange na-enweta ọdụ data, mgbe ahụ nke ahụ nwere ike ime ka ọdụ data gị mebie na OST faịlụ nwa mgbei.
Mmebi Kaadị Njikwa ma ọ bụ Ọdịda. Ọ bụrụ na ejiri caching njikwa na Exchange Server, ya malfunction ma ọ bụ ọdịda ga-eme ka ihe niile echekwara data lost na nrụrụ data nchekwa, ime ka OST faịlụ nwa mgbei.
E nwere ọtụtụ usoro iji gbochie ma ọ bụ iwelata Exchange Server nchekwa data nrụrụ aka na OST faịlụ a na-enweghị nne na nna n'ihi nsogbu ngwaike, dịka ọmụmaatụ, UPS nwere ike belata nsogbu nsogbu ike, yana iji ngwaọrụ ngwaike a tụkwasịrị obi nwekwara ike belata ohere nke nrụrụ data.
Ọzọkwa Exchange OST faịlụ nwere ike ịbụ nwa mgbei n'ihi nsogbu metụtara software.
Hichapụ, Gbanyụọ, ma ọ bụ Gọnahụ ịnweta nke igbe akwụkwọ ozi dị na Server Server. Ọ bụrụ na igbe akwụkwọ ozi dị na Exchange Server kwekọrọ na OST faịlụ ahụ na-ehichapụ ma ọ bụ nkwarụ site na gị na ihe nkesa nchịkwa, ma ọ bụ gị ohere igbe akwụkwọ ozi dị na-agọnarị. mgbe ahụ mpaghara gị OST faịlụ na-enweghị nne na nna na ị ga-adabere DataNumen Exchange Recovery iji weghachite ọdịnaya nke igbe akwụkwọ ozi gị.
Nje Virus ma ọ bụ sọftụwia ọjọọ ọzọ. Ọtụtụ nje ga-efe efe na imebi Exchange Server ọdụ data na-eme ka ha unusable, nke ga-emekwa ka OST faịlụ nwa mgbei. Ọ na-ukwuu tụrụ aro ka ịwụnye mma mgbochi nje software gị Exchange Server usoro.
Mmekọrịta mmadụ. Mmehie mmadụ, dị ka ihichapụ ọdụ data na ndudue, ịkewapụ ngwaọrụ nchekwa, ịkpụzi sistemụ arụmọrụ, ga-eme ka nchekwa data Server Server adịghị, wee mee OST faịlụ nwa mgbei.
Idozi Nwa Mgbei OST Files:
mgbe gị OST faịlụ ndị na-enweghị nne na nna, ị ka nwere ike iji anyị award-emeri ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery na weghachite data na Exchange Exchange OST files, ya mere iji weghachite ọdịnaya nke igbe akwụkwọ ozi gị ọzọ.